Vaovao - Fi Eropa 2019 - Akora ilaina amin'ny sakafo sy fampirantiana teknolojia
Fi Eoropa 2019 - Akora ilaina amin'ny sakafo sy fampirantiana teknolojia
Nanatrika ny Sakafo Eoropeana Eoropa 2019 ny Ranomasina eran-tany tamin'ny Desambra.3–5, 2019 tany Paris, France.
Fotoana fampirantiana: 3- 5 Des 2019
Toerana fampirantiana: Paris, France
Fi Europe, nokarakarain'ny UBM International Media malaza indroa isan-taona, dia natao tany Paris, France, amin'ny taona 2019. Ity fampirantiana ity dia hetsika iraisam-pirenena tokoa amin'ny indostrian'ny sakafo sy ny teknolojia. Ao anatin'ny 3 andro monja dia hahita fotoana be dia be ianao amin'ny raharaham-barotra noho izay azonao eritreretina. Voahodidin'ny mpiara-miasa tena izy ianao, atokisana ary matihanina .Miorena fifandraisana mafy orina ary aza hadino ny fotoana mety indrindra amin'ny varotra manerantany.
Amin'izao fotoana izao, ny fampirantiana no fanangonana mpamatsy kojakoja sakafo lehibe indrindra eran-tany, fampiroboroboana ny teknolojia fampiasa, fampiroboroboana trinite ho an'ny mpividy sakafo, lasa sehatry ny sakafo ho an'ny fahatsiarovan-tena ambony indrindra amin'ny tampon'ny varotra ambony. nohajain'ny tsena iraisam-pirenena tsikelikely noho ny karazany maro, ny kalitao ary ny vidiny ambany. Ireo orinasa mpamokatra sakafo amin'ny fampidirana ny haitao sy vokatra farany avy any ivelany amin'ny fotoana iray ihany koa dia nampitombo ny ezaka hitrandrahana ny tsena iraisam-pirenena. amin'ireo orinasa sinoa mandray anjara amin'ny fampirantiana nandritra ny taona maro, lasa fifanarahan'ny orinasa mpamokatra sakafo maro hanitatra ny tsena any ivelany sy hanatsara ny fifaninanana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ity fampirantiana ity.
Miaraka amin'ny velarantany 80,000 metatra toradroa, ny fampirantiana 2017 dia nahasarika fampirantiana mihoatra ny 1.800 ary mpitsidika matihanina maherin'ny 26000 avy amin'ny firenena sy faritra 119, 78% amin'izy ireo dia manana zon'ny mividy ary 29% amin'izy ireo no manana teti-bola mihoatra ny 500.000 euro.